Xiaomi Mi Airdots 2s dia aseho: headphones vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena 24 ora | Androidsis
Xiaomi Mi Airdots 2s dia aseho: headphones vaovao miaraka amin'ny fahaleovan-tena 24 ora
daniplay | | Fitaovana hafa
Xiaomi dia teo amin'ny tahan'ny fampisehoana vokatra teknolojia vaovao hatramin'ny volana martsa. Fantatry ny orinasa ny fifaninanana masiaka ataon'ireo mpanamboatra hafa ary nanapa-kevitra ny handray ny polony izy ireo amin'ny fanombohan'ny sasany headphone vaovao izay antsoiny My Airdots 2s.
Ny Aziatika dia mandefa ity mpivady vaovao ity rehefa nanolotra ny Andalana Xiaomi Mi 10 ny headphones Earphones mi 2 Wireless Wireless. Mazava be fa ny hevitry ny orinasa dia ny manolotra safidy hafa ho an'ny mpanjifany ary vokatra misy famolavolana tsara ary koa fizakantena mahaliana.
1 Ny fiasa amin'ny Mi Airdots 2s
Ny fiasa amin'ny Mi Airdots 2s
ny Xiaomi Mi Airdots 2s vaovao Tsy dia manana fahasamihafana be izy ireo ivelan'ny maodely Xiaomi Air 2 TWS, fa ny zavatra tsara dia mitranga ao anaty telefaona tsirairay. Misongadina amin'ny famindrana binaural izy, ny feo dia alefa amin'ny fanatsarana ny fitoniana ary ny latency dia 25% fotsiny.
Ny AirDots 2s dia manampy fanampiana ho an'ny mpanampy virtoaly Xiaomi Xiao AI, izay hahazo baiko maromaro kokoa hangataka amin'ny mpanampy. Azonao atao ny mangataka vaovao, mahazo fampahatsiahivana ny làlana tsirairay ary mitantana ny famerenana mozika amin'ny telefaoninao aza.
El Xiaomi Mi Airdots 2s tonga tsy misy fanafoanana ny tabataba mavitrika, fa ianao kosa manapa-kevitra amin'ny ENC (Cancion Noise Ambient) ho an'ireo mikraoba namboarina. Xiaomi dia mampanantena kalitao avo lenta amin'ity rindrambaiko finday ity ary azo antoka fa ho variant tsy lafo izy io manomboka amin'ity volana ity.
Ho tonga 24 ora miaraka amin'ny boaty ny fizakan-tena, ahena 5 ora amin'ny famoahana feo maharitra. Bluetooth 5.0 izy ireo, noho izany manome antoka fa vonona ny handeha moramora amin'ireo finday finday avo lenta farany misy azy ireo izy ireo.
Hahatratra ny tsena sinoa izy ireo ao anatin'ny efatra andro ary hahatratra fanitarana, taorian'izay Xiaomi vonona ny hivarotra ny My Airdots 2s be dia be. Ny vidiny dia 399 yuan, izay amin'ny fanovana dia manodidina ny 52 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Xiaomi Mi Airdots 2s dia aseho: headphones vaovao miaraka amin'ny fahaleovan-tena 24 ora
Amazon dia miasa amin'ny sehatra streaming streaming lalao hifaninana amin'i Stadia: hatao hoe Project Tempo izany
Blackview BV9900 Pro dia telefaona goavambe misy ny haitao 4K sy ny haitao fakana sary